7-da barnaamij ee ugu wanaagsan iyo ciyaaraha carruurta yaryar loogu talagalay Android | Androidsis
7-da barnaamij ee ugu wanaagsan iyo ciyaaraha carruurta yaryar ee loogu talagalay Android
Haaruun Rivas | | Codsiyada Android, Ciyaaraha Android
Maanta, mid ka mid ah carqaladeynta ugu wax ku oolka badan iyo habab waxbarasho ee carruurta yar yar waxaa ka mid ah taleefannada Android. Waana taas, iyada oo loo marayo kuwan iyo dhammaan barnaamijyada iyo cayaaraha la heli karo, kan ugu yar guriga ayaa ka faa'iideysan kara waqtigooda firaaqada. Si sax ah sababtaan awgeed waxaan kuu soo bandhigeynaa qoraalkan uruurinta cusub, oo aad ka heli doonto 7-da barnaamij ee ugu fiican, qalabka iyo ciyaaraha socodbaradka.
Waxaan qoreynaa cayaaraha iyo barnaamijyada ugu xiisaha badan ee hadda laga heli karo Google Play Store oo loogu talagalay carruurta yaryar. Dhammaantood waa bilaash oo, dabcan, kuwa ugu fiican ee nooceeda ah. Intaas waxaa sii dheer, waxay leeyihiin qiimeyn wanaagsan iyo faallooyin ayidsan.
Hoos waxaan ku soo lifaaqnay taxane ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee loogu talagalay carruurta yaryar ee taleefannada Android. Waxaa xusid mudan, sida had iyo jeer aan yeelno, taas dhammaan kuwa aad ka heli doontid qoraalkan uruurinta waa bilaash. Sidaa darteed, uma baahnid inaad fargeeto wax lacag ah si aad u hesho mid ama dhammaantood. Si kastaba ha noqotee, mid ama in ka badan ayaa laga yaabaa inay leeyihiin nidaam lacag-bixin gudaha ah, oo u oggolaanaya helitaanka waxyaabo badan oo dhexdooda ah, iyo sidoo kale astaamo qiimo sare leh iyo kuwo horumarsan. Sidoo kale, looma baahna in wax lacag ah la bixiyo, waxaa mudan in lagu celiyo. Hadda haa, aan u nimaadno.
1 Carruurta midabaynta bogagga! Ciyaaraha caruurnimada!
2 Waraaqaha sanduuqyada ku jira! Ciyaaraha barashada alifbeetada!
3 Ciyaaraha waxbarashada ABC ee carruurta! Baro akhriska!
4 EWA Kids: Ingiriisiga Carruurta
5 Tartanka Caasimadaha
6 Ingiriisiga loogu talagalay carruurta: wax baro oo ciyaaro
7 Dugsiga barbaarinta Montessori
Carruurta midabaynta bogagga! Ciyaaraha caruurnimada!
Mid ka mid ah waxyaabaha ay carruurta yaryar aad u jecel yihiin, shaki la'aan, waa midabaynta. Taasi waa sababta ciyaar noocaan ah looga waayi karin qoraalkan uruurinta, maadaama tani ay tahay mid ka mid ah waxqabadyada inta badan ku maaweeliya isla markaana, isla mar ahaantaana, faa'iido u leh hal-abuurka, hal-abuurnimada iyo horumarka maskaxda.
Waxba kuma jabna inta ilmuhu yar yahay. Barnaamijkani wuxuu ku habboon yahay kuwa jira 3 sano iyo wixii ka weyn. Kaliya ku baraan hawsha cunuggu kaligiis ayuu u isticmaali doonaa. Waxaad arki doontaa taas, daqiiqado gudahood ama in ka badan, way la qabsan doontaa oo waxay bilaabi doontaa midabaynta aan joogsi lahayn.
Waxaa loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo dhadhanka farshaxanka Waxayna la imaaneysaa 100 jilayaal quruxsan oo soojiidasho leh midab leh, iyo sidoo kale daraasiin sawir iyo xariiq xariiq ah iyo sawir far ah Waxa kale oo ku jira ciyaaro barasho oo tiro badan, in ka badan 300 oo animations iyo dhawaaqyo madadaalo ah, buug midabayn iyo sawirro sawir ah oo loogu talagalay carruurta, ciyaaraha loogu talagalay carruurta da'doodu tahay 3 iyo wixii ka dambeeya si loo horumariyo xirfadaha dhaqdhaqaaqa wanaagsan, ciyaaraha bilaashka ah ee gabdhaha si ay u horumariyaan xirfadaha qorista ka hor, sawiridda ciyaarta loogu talagalay xayawaanka carruurta iyo astaamaha xakameynta waalidka ee cayaaraha midabaynta bilaashka ah.
Waraaqaha sanduuqyada ku jira! Ciyaaraha barashada alifbeetada!
Waraaqaha sanduuqyada ku jira! waa barnaamij leh habab iyo ciyaaro fara badan oo loogu talagalay barashada xarfaha carruurta yaryar. Waa qalab aad u firfircoon, barbaarin iyo madadaalo u ah kan ugu yar guriga, isla markaana leh ujeedo ah in laga caawiyo horumarintooda iyo koritaankooda maskaxeed, iyadoo la soo bandhigayo farsamooyin barasho akhris oo kala duwan oo loogu talagalay carruurta da'doodu tahay 2 ilaa 5 sano jir. Waxay sidoo kale wax ku ool u noqon kartaa carruurta waaweyn, laakiin diiraddu waxay saaran tahay tan ugu yar.
Barnaamijkan ayaa leh ciyaaraha ay carruurtu ku khasban tahay inay ugaarsadaan oo ay soo qabtaan xarfaha si ay u samaystaan ​​una dhisaan ereyo fudud. Waraaqaha waa kuwo firfircoon oo aad u qurux badan, sidaas awgeedna waxay soo jiitaan indhaha carruurta yar yar si looga ilaaliyo inay ku mashquulaan waxbarashada joogtada ah.
Carruurtu waxay kaloo baran karaan alifbeetada oo ay ku jiraan Waraaqaha sanduuqyada ku jira!, Maaddaama ay adeegsanayso dhammaan kuwa jira, sidaa darteed waxay baran karaan inay dhammaantood adeegsadaan. Aaladaha wax ku oolka ah ee barnaamijkan, carruurtu sidoo kale waxay u nugul yihiin inay bartaan dhawaaqyada ereyada, iyo sidoo kale macnahooda iyo sida iyo goorta loo adeegsanayo.
Dhammaan xujooyinka uu soo bandhigo si ereyo loo dhiso waa waxbarid; markii la xallinaayo, waxaa la soo saaray sawir siinaya sharaxaad muuqaal ah oo erayada ah. Waxaa jira in ka badan 100 erey oo carruurtu baran karaan mahadnaqa firfircoonida madadaalo leh ee ay soo bandhigeen xarfaha xaragada leh ee cayaaraha barnaamijkan.
Ciyaaraha waxbarashada ABC ee carruurta! Baro akhriska!
Ciyaaraha waxbarashada ABC ee carruurta! waa barnaamij kale oo weyn oo loogu tala galay socodbaradka da'adoodu u dhexeyso 4 ilaa 5 sano. Waxay sidoo kale aad ugu fiican tahay carruurta naafada ka ah waxbarashada iyo kuwa ku jira dugsiga hoose, iyadoo la siinayo dhammaan waxyaabaha ay ku soo bandhigeyso hab madadaalo leh oo madadaalo leh iyada oo loo marayo ciyaaraha barbaarinta iyo sawirada ku saabsan xarfaha, ereyada, eray bixinta iyo alifbeetada.
Carruurta u isticmaasha Ciyaaraha Waxbarshada ee ABC ee Carruurta! Waxay baran doonaan sameynta, aqrinta, iyo ku dhawaaqida ereyada iyo dhawaaqyada si deg deg ah. Sidoo kale si loo aqoonsado loona isticmaalo xarfaha. Tan kale waa taa Waxay baran doonaan inay qoraan ereyo fudud, ka dibna waxay u gudbaan qorista ereyo dhaadheer oo aad u adag. Waa caawiye wanaagsan oo barasho ah, shaki la'aan, xitaa intaas ka sii badan haddii ilmuhu waxoogaa dhibaato ah ku qabo barashada iyo feejignaan la'aanta, maaddaama animations-ka, midabada iyo dhammaan cayaaraha ku jira barnaamijkan ay yihiin kuwo aad u xiiso badan oo madadaalo leh.
Isla mar ahaantaana, Barnaamijkani wuxuu ka caawiyaa carruurta inay fahmaan ereyada, ma aha oo kaliya inay qoraan oo ay ugu dhawaaqaan. Waxay ka dhigtaa inay carruurtu ku bartaan macnaheeda si wax ku ool ah.
Waxtarka codsigan loogu talagalay carruurta waxaa lagu muujiyey qiimeyntiisa in ka badan 4.3 xiddigood, in ka badan 5 milyan oo soo degsasho ah iyo in ka badan 25 kun oo faallooyin togan. Maaha wax aan ka ahayn mid ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan ee laga soo dejistay qaybteeda.
Aprender a leer Juegos educativos Juegos de letras
EWA Kids: Ingiriisiga Carruurta
Waxay u badan tahay inaad horay u maqashay barnaamijka EWA ee barashada Ingiriisiga kahor, tanina waxaa laga yaabaa inay ugu wacan tahay caannimada weyn ee barnaamijka asalka ah ee Play Store, kaas oo leh in kabadan 10 milyan oo soo degsasho ah iyo qiimeyn 4.6-xidig ah. EWA Kids: Ingiriisiga loogu talagalay Carruurta waa nooca loogu talagalay midka ugu da'da yar, iyadoo hababka barista iyo barashada loogu talagalay midka ugu yar.
Kuwa yar yar ayaa u adeegsan kara barnaamijkan inay ku isticmaalaan 15 daqiiqo oo keliya maalintii, taas oo inta badan ku filan in aqoonta lagu soo ururiyo. Si kastaba ha noqotee, si dhakhso leh iyo natiijooyin waara oo sii socda, ayaa ka sii fiican. Waxay kaloo leedahay sawirro, matalaad iyo, dabcan, ciyaaro kala duwan oo gacan ka geysanaya barista Ingiriiska ee carruurta. Waa mid aad u firfircoon wuxuuna soo bandhigayaa habab iyo farsamooyin fara badan oo loogu talagalay nuugista luqadda carruurta yaryar.
Waxay la timid daraasiin casharro ah, koorsooyin aasaasi ah, iyo tarjumaadyo ka caawinaya habka barashada, iyo sidoo kale xujooyinka fudud iyo ciyaaraha. Waxa kale oo ku jira boqolaal buugaag ah oo turjumaad iyo sawirro ka caawinaya sii wadista afsoomaaliga aasaasiga ah. Sida haddii aysan taasi ku filnayn, waxay u taagan tahay erayo badan oo maqal ah si ilmuhu u ogaado sida loogu dhawaaqo.
Developer: Lithium Lab Pte Ltd.
Tartanka Caasimadaha waa codsi aad u fiican iyo qalab loogu talagalay kuwa yaryar baro kuwaas oo ah kuwa ugu muhiimsan magaalooyinka iyo caasimadaha adduunka. Barnaamijkan, carruurta yaryar waxay ku baran doonaan juqraafiga iyo dalal badan.
Iyadoo la adeegsanayo su'aalo iyo ciyaaro badan oo xulasho ah, carruurtu waxay awoodi doonaan inay ku ogaadaan caasimadaha ku habboon dal kasta. Ciyaartan waxaa ku jira animations, sawir gacmeedyo kartoon ah oo ku habboon carruurta yaryar, iyo muusig madadaalo leh Isla mar ahaantaana, waxay baraysaa taallooyinka waddammada, lacagaha caalamiga ah ee mid kasta, calanka, gobollada, qaaradaha iyo waxyaabo kale oo badan. Waxa kale oo ku jira 10 qaabab ciyaar oo bilaash ah iyo 5 heerar dhib ah oo si fudud loo saxi karo.
Ingiriisiga loogu talagalay carruurta: wax baro oo ciyaaro
Sidaan ognahay barashada Ingiriisiga waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu wax soo saarka badan ee carruurta guriga, waxaan kuu soo gudbineynaa codsi kale oo ku saabsan, mid sidoo kale lagu gartaa inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu fiican noociisa, marka la eego shaqooyinkiisa kala duwan, ciyaaraha iyo tilmaamo wax ku ool ah oo lagu barto ereyada iyadoo loo marayo mowduucyo kala duwan sida alifbeetada, tirooyinka, midabada, qaababka, maalmaha usbuuca, bilaha sanadka, miraha, khudaarta, xayawaanka, shimbiraha, cuntada, dharka, jikada, qolka jiifka, dugsiga iyo isboortiga.
Codsigani wuxuu la yimaadaa ciyaaro raadinta iyo sameynta ereyo Ingiriis ah qoraal ahaan. Waxa kale oo ay leedahay xujooyinka xasaasiga ah iyo qaababka waxbarista barbaarinta carruurta yaryar ee ka caawiya fasallada Ingiriisiga iyo, haddii aysan ku jirin midkood, inay jeclaadaan luqadaha kale sidoo kale. Tan, caruurtu waxay si dhakhso leh u baran doonaan Ingiriisiga aasaasiga ah.
Dugsiga barbaarinta Montessori
Si loo dhammeeyo qoraalkan uruurinta ee codsiyada ugu fiican iyo ciyaaraha carruurta ee laga heli karo Android Play Store, waxaan leenahay Montessori Preschool, codsi si caddaalad ah u dhammaystiran oo ka kooban nashaadyo badan iyo laylisyo waxtar leh oo loogu talagalay carruurta yar yar iyo carruurta fahamka iyo barashada leh dhibaatooyinka nolol maalmeedka iyo dugsiga labadaba.
Barnaamijkan wuxuu ka hadlayaa mowduucyada sida midabada, qaababka, ku dhawaaqida, aqrinta ereyada fudud iyo kuwa isku dhafan, tirooyinka, iskugeynta, kalagoynta, muusikada iyo waxyaabo kaloo badan. Sidaa darteed, Waxay ka mid tahay kuwa ugu dhammaystiran xagga barista iyo barashada. Waxay ku takhasustay carruurta da'doodu tahay 3 illaa 7 sano, laakiin sidoo kale waxay ku fiicnaan kartaa carruurta waaweyn ee aan baran aasaasiga da'da hore. Waxay u shaqeysaa sida fasal dalwaddii ah iyo, si loo dhiirrigeliyo, waxay bixisaa nidaam abaalmarin ah oo carruurta ka ilaalin doona inay ku xirnaadaan barashada.
Developer: AKOODKA EDOKI
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 7-da barnaamij ee ugu wanaagsan iyo ciyaaraha carruurta yaryar ee loogu talagalay Android
Kospet Optimus 2: bilaabid, muuqaalo iyo helitaan
5 kulan oo aan ka maqnaan karin moobilkaaga Android